I-Google Analytics Segments - Sealt Practice
Xa kuziwa ukuxoxa nge-Google analytics nabanye, kufuneka uvile "Ndifuna iingcebiso," "andizange ndisebenzise i-Google analytics," kunye nezinye izinto ezifanayo. I-Artem Abgarian, i-8 (Semalt ingcali, ibonisa ukuba kubalulekile ukusebenzisa amacandelo kwi-Google Analytics ukuba ufuna ukufumana inani elaneleyo leendwendwe kwiwebhusayithi yakho.
Kwi-Google Analytics, inxalenye yinto ekhethekileyo yedatha okanye isicatshulwa esikunika ingcamango yobungakanani bendlela yakho. I-Google analytics isinika ithuba elininzi lokuphucula ukusebenza ngokubanzi kwesayithi kunye neeseshoni kwakunye nezinga lokuhlawulela labasebenzisi. Ukuba ufuna ukufumana ingcamango yoluphi uhlobo lwamaphepha okanye amanqaku afumana ukujonga okungakumbi kunye nokuba zimbonakalo zembonakalo yakho indawo, ufanele wenze oko usebenzisa iiGG. Oku kuya kukunceda unciphise idatha yakho ukuze ukwazi ukufumana iziphumo ezichanekileyo kunye neziphumo ezigqithiseleyo kunaphambili.
Kutheni ufuna iigqeba?
Makhe ndixelele apha ukuba iwebhusayithi yakho kunye nedatha yayo ayikwazi ukukhuselwa okanye ihlanganiswe ngokufanelekileyo ngaphandle kwecandelo. Oku kunokukunceda wenze izigqibo ezifanelekileyo. Iingcali zithi yonke idatha kunye nolwazi ngokubanzi luyeke, ngoko kufuneka ufumane isahlulo. Ngokomzekelo, ukuba ufuna ukuqinisekisa umgangatho weendwendwe zewebhusayithi yakho, kufuneka ulwahlule i-Google Analytics kunye nedatha yayo ibe ngamacandelo kwaye wenze izihlungi ezifanelekileyo..Idatha ihlanganiswe kangangokuba awukwazi ukwakha naziphi na izicwangciso ngaphandle kokuhlula okufanelekileyo. Ungaqhubeka nokukhuthaza iwebhusayithi yakho kunye nemveliso ye-intanethi, kodwa akukho nzuzo njengoko awuyi kuzuza nayiphi na intengiso okanye usebenziswano lomsebenzisi.
Indlela yokudala isigaba kwi-Google Analytics?
Ukuba ufuna ukwakha amacandelo kwi-Google Analytics, into yokuqala okufuneka uyenze ukuhlela izihlungi uze uyiqambe kabusha ngokusekelwe kwimeko yesayithi lakho. Makhe ndixelele apha ukuba izicwangciso zilula ukuhlela, ukususa okanye ukubiza kwakhona, kodwa awukwazi ukususa idatha yangempela njengoko inokulimaza iwebhusayithi yakho yonke. Kwabaninzi kuthi, akukaze kubaluleke ukudala amacandelo, kodwa ngaphandle kwayo, awukwazi ukuqinisekiswa ngokufumana ithrafikhi esemgangathweni ukusuka kwiinjine zokukhangela .
Kukho ezimbini iindidi eziphambili zamagqabantshintshi, iigqeba zeenkqubo, kunye namacandelo amasiko. Amagqabantshintshi enkqubo anika iinkcukacha ezichanekileyo kunye nezinketho kwi-Google Analytics kwaye azikwazi ukutshintshwa xa zenziwe. Noko ke, banokuthi bahlengahlengiswe ngamaphepha akho okufika kunye namaphrofayli asekuhlaleni. Amacandelo eSebenzi ancedo njengoko abanobuchwephesha bemoto kwaye anokufumana ezininzi iimboniselo ezivela kumadivayisi eselula. Amacandelo angokwezifiso ayanzima kwaye athandwa kakhulu kunamacandelo eenkqubo. Banikela ngeendlela ezahlukeneyo zokukhetha kwiGoogle Analytics. Ngokomzekelo, unokwenza iigqeba ezicoca iindwendwe ezichitha imizuzu engaphantsi kwemashumi amathathu kwiwebhusayithi yakho. Kwakhona kunokwenzeka ukwakha amacandelo ukuze ufumane imibono ejoliswe kwilizwe kumaphepha akho ewebhu. Konke oku kuya kuphucula ukusebenza ngokubanzi kwendawo yakho, kwaye umgangatho wezithuthi zakho uza kuphuculiswa ngokupheleleyo.